नाइजेरियाली गायक डेभिडो Chioma आफ्नो प्यारो - टेलि रिले सहित सबैको सदस्यता समाप्त गर्दछ
नाइजेरियाली गायक डेभिडो डार्लिंग Chioma सहित सबैबाट सदस्यता समाप्त गर्दछ
By bryanekobe On जुन 21, 2020
0 88 703
केही दिनको लागि समाचारको मुटुमा, नाइजेरियाली गायक डेभिडोले एक यस्तो कार्य गर्‍यो जुन एक भन्दा बढि अचम्मित हुन्छ। ऊ इन्स्टाग्राममा सबैबाट सदस्यता समाप्त गर्दछ। विवाद समाप्त गर्ने समाधान?
हप्ताहरूको लागि, अफवाहहरूले ट्विटरमा डेभिडोलाई तानेका छन्; यद्यपि, गायक र उनको मंगेतर उनीहरूले बेवास्ता गरे।
यी हल्लाहरू यस्तै थिए कि गायकले लेओकीको उनको घरमा Chioma सँग झगडा गरेपछि उनको खुट्टा भाँचेका थिए। डेभिडोले अर्को आइमाईसँगै अर्को बच्चालाई स्वागत गरेको कुरा चियोमाले पत्ता लगाएपछि झगडा भयो।
जुन पछि Chioma ले यो आफुमा लिएको थियो जुन उनले १ Instagram जूनमा आफ्नो इन्स्टाग्राम पृष्ठमा साझेदारी गरेको एक पोष्टमा सत्य स्थापित गर्न खोज्यो। उनले त्यहाँ भनिन् कि डेभिडो उनीप्रति कहिल्यै हिंसात्मक थिइनन्, न त उनी आफ्नो छोराको बुबाप्रति कहिल्यै हिंसात्मक थिइन्।
साथै उनको प्यारी छोरी विन्डो मा उनको आँखा आँसु संग कदम थियो र उनको सानो परिवार को लागी एक इच्छा गर्नुभयो। यसको परिणाम स्वरूप उनको अन्तको मनोवृत्ति चौंकिने अवस्थामा पुग्छ।
वास्तवमा, नाइजेरियाका गायक डेभिडोले इंस्टाग्राममा सबैबाट सदस्यता रद्द गरे। र जब हामी भन्छौं कि सबैजना वास्तवमै उनको मंगेतर Chioma Rowland सहित सबै थिए।
यसैले, उनको इन्स्टाग्राम खाताले अब ० सदस्यता प्रदर्शन गर्दछ र अहिले सम्म न उहाँ न त उनका कर्मचारीले यस विषयमा कुनै बयान गरेका छन्। ऊ दोषी हुनेछ वा यो आरोप लगाइएकोमा दोषी हुनेछैन वा यो एक सरल चाल हो?
यो लेख पहिलो पटक देखा पर्‍यो: https://afriqueshowbiz.com/davido-se-desabonne-de-tout-le-monde-y-compris-chioma-sa-cherie/
आइतवारमा एउटा रोटी क्रेटको प्रबन्धकको खोजी गर्दै
लेडी गागा गर्भवती छिन् (फोटोहरू)